သောသီခို: ဒီကေဘီအေ နှင့် နအဖ တိုက်ပွဲသတင်း
သတင်း+ဓါတ်ပုံ ပေးပို့ သူ- နန်းဖေါခလိန်း
၁၀၊ ၁၂၊ ၂၀၁၀ ရက်နေ့ ။
7/ 12/ 2010 ရက်နေ့ဒီကေဘီအေ နှင့် နအဖ တပ်များ ဖလူးဒေသတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာတွင် ၁၀ နာရီကျော် အချိန်ကြာမြင့်ခဲပါသည်။ နအဖ ဖက်မှ ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါသည်။ နအဖ စစ်တပ်မှ သေ+ဒဏ်ရာရရှိသူ စုစုပေါင်း ၃၇ ဦး ဖြစ်ပါသည်။
8/12/2010 ရက်နေ့ တွင် ဆက်လက်ပြီး နံနက် ၁၁:၄၀ နာရီတွင် ၄င်းနေရာ၌ တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားရာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားမှု နာရီပေါင်း ၁၁ နာရီ ကြာမြင့်ပါသည်။ နအဖ စစ်တပ်မှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပါသည်။ နအဖ စစ်တပ်မှ တပ်ခွဲမှူးတစ်ဦး(ကြယ်သုံပွင့်) နှင့် ဒုခွဲမှူးတစ်ဦး(ကြယ်နှစ်ပွင့်) အလောင်း ကျန်ခဲ့ပါသည်။
မနက်မိုးလင်း 9/12/2010 ရက်နေ့ တွင် ဒီကေဘီအေ တပ်မှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နေရာကို တက်ရောက်ရှင်းလင်းရာတွင် စကားပြောစက် သေးတလုံး၊ လက်ဖြင့်လည်ပတ်ရသော စက်ကြီးတလုံး၊ မှတ်တမ်းအချိူ့ နှင့်မြေပုံ များကို သိမ်းစည်းရမိပါသည်။ သေနတ်ထိမှန်သော စစ်ဦးထုပ်များ စစ်အသုံးအဆောင်ပစွည်းများ ပုံပါအတိုင်းသိမ်းဆည်းရမိပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ နှင့် ၈ ရက်နေ့ တွင် ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲ၌ နအဖ ဖက်မှ ၂၆ ဦးသေဆုံးပြီး ၃၉ ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အတည်မပြုနိုင်သေးသည့်သတင်းအရ နအဖ စစ်တပ်မှ သေ+ဒဏ်ရာရ စုစုပေါင်း ၁၀၀ ဦးကျော်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဓါတ်ပုံတွင် တွေ့ ရှိရသော လူသေအလောင်းများသည် ကရင် ငြိမ်းကောင်စီမှ တပ်သားများဖြစ်ပြီး နအဖ စစ်တပ်မှ အရှင်ဖမ်းပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရက်ရက်စက်စက် မီးရှီု့ သတ်ပစ်သည့် ဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါသည်။
DKBA V SPDC 7-8-9 Dec 2010
Posted by လင်းလက် ကြယ်စင် at 4:35 AM
It is Karen real Blood.
Fight and will win.
Karen blood red red.
Knyaw Thwee Gaw Gaw don't be afraid fight and kill all dog Burmese.
that's right... karen blood is really red. kill all the burmese dog. I am very proud of you karen.